စပါးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခု ရရှိခဲ့တဲ့ ရာကီတစ်
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဥရောပပြိုင်ပွဲ သွင်းဂိုး(၆၀၀)ပြည့်မှတ်တမ်းပိုင်ရှင် ရာကီတစ် Rakitic
4 Oct 2018 . 6:39 PM
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ခရိုအေးရှားလက်ရွေးစင် ကွင်းလယ်လူ ရာကီတစ် Rakitic ဟာ စပါးအသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲမှာ ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ဘာစီလိုနာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ဥရောပပြိုင်ပွဲတွေမှာ သွင်းဂိုး(၆၀၀)ပြည့်အဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မယ့်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့လို့ပါပဲ။ စပါးအသင်းကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ရာကီတစ်က အသင်းအတွက် ဒုတိယဂိုးကို ပွဲချိန်(၂၈)မိနစ်မှာ ဂိုးဧရိယာထိပ်ကနေ လှပတဲ့ Volley ကန်ချက်နဲ့ သွင်းယူခဲ့ပြီး အဲဒါဟာ ဘာစီလိုနာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် ဥရောပပြိုင်ပွဲ သွင်းဂိုး(၆၀၀)ပြည့် ဂိုးလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။
ရာကီတစ်အရင် ဘာစီလိုနာအသင်းအတွက် ရာပြည့်ဂိုးတွေ သွင်းယူခဲ့သူက စတွိုင်ကော့ဗ် Stoichkov (၁၀၀ ပြည့်ဂိုး)၊ ကလွိုက်ဗတ် Kluivert (၂၀၀ ပြည့်ဂိုး)၊ အီတူး Eto’o (၃၀၀ ပြည့်ဂိုး)၊ ဒေးဗစ်ဗီလာ David Villa (၄၀၀ ပြည့်ဂိုး)၊ မက်ဆီ Messi (၅၀၀ ပြည့်ဂိုး)တို့ဖြစ်ပြီး ထူးခြားတာက သူတို့အားလုံးဟာ အသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရာကီတစ်ဟာ နည်းပြဗယ်လ်ဗာဒီ Valverde လက်ထက်မှာ အသင်းရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူအဖြစ် ပါဝင်ခွင့်ရရှိနေပြီး ဒီရာသီ ပြိုင်ပွဲစုံ (၁၀)ပွဲကစား (၂)ဂိုး သွင်းထားပါတယ်။
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဥရောပပွိုငျပှဲ သှငျးဂိုး(၆၀၀)ပွညျ့မှတျတမျးပိုငျရှငျ ရာကီတဈ Rakitic
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ခရိုအေးရှားလကျရှေးစငျ ကှငျးလယျလူ ရာကီတဈ Rakitic ဟာ စပါးအသငျးကို အနိုငျရခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျပှဲမှာ ဂုဏျယူစရာကောငျးတဲ့ မှတျတမျးတဈခု ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ ဘာစီလိုနာအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ဥရောပပွိုငျပှဲတှမှော သှငျးဂိုး(၆၀၀)ပွညျ့အဖွဈ မှတျတမျးဝငျမယျ့ဂိုးကို သှငျးယူခဲ့လို့ပါပဲ။ စပါးအသငျးကို (၄-၂)ဂိုးနဲ့ အနိုငျရခဲ့တဲ့ပှဲမှာ ရာကီတဈက အသငျးအတှကျ ဒုတိယဂိုးကို ပှဲခြိနျ(၂၈)မိနဈမှာ ဂိုးဧရိယာထိပျကနေ လှပတဲ့ Volley ကနျခကျြနဲ့ သှငျးယူခဲ့ပွီး အဲဒါဟာ ဘာစီလိုနာအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ ဥရောပပွိုငျပှဲ သှငျးဂိုး(၆၀၀)ပွညျ့ ဂိုးလညျးဖွဈခဲ့တယျ။
ရာကီတဈအရငျ ဘာစီလိုနာအသငျးအတှကျ ရာပွညျ့ဂိုးတှေ သှငျးယူခဲ့သူက စတှိုငျကော့ဗျ Stoichkov (၁၀၀ ပွညျ့ဂိုး)၊ ကလှိုကျဗတျ Kluivert (၂၀၀ ပွညျ့ဂိုး)၊ အီတူး Eto’o (၃၀၀ ပွညျ့ဂိုး)၊ ဒေးဗဈဗီလာ David Villa (၄၀၀ ပွညျ့ဂိုး)၊ မကျဆီ Messi (၅၀၀ ပွညျ့ဂိုး)တို့ဖွဈပွီး ထူးခွားတာက သူတို့အားလုံးဟာ အသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျစာရငျးထဲမှာ ပါဝငျနသေူတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ရာကီတဈဟာ နညျးပွဗယျလျဗာဒီ Valverde လကျထကျမှာ အသငျးရဲ့ အဓိက ကှငျးလယျလူအဖွဈ ပါဝငျခှငျ့ရရှိနပွေီး ဒီရာသီ ပွိုငျပှဲစုံ (၁၀)ပှဲကစား (၂)ဂိုး သှငျးထားပါတယျ။
by Naing Linn . 36 mins ago